Gas Turbines ဂငျြနရတောစကျ | S.E.A. POWER GENT CO., LTD.
Gas Turbines ဂငျြနရတောစကျ
Gas Turbines အမျိုးအစားမီးနိူးစက် တံဆိပ် Solar Turbines မျိုးရိုး Centaur40 အရွယ်အစား 3,515 kW သည် Caterpillar မှ ဂက်စ်မီးနိူးစက်ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းမျှတ၍ အမြင့်ဆုံးစက်မှုဇုန်စံချိန် ရှိသည်။ တပ်ဆင်ရေးနှင့်ရောင်းပြီးနောက်ပိုင်း ၀န်ဆောင်မှုရှိသည်။ USA မှ ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတရံတွင် နိူင်ငံခြားမှ အရည် အသွေးသန့်သည့် သုံးပြီးသားစက်လည်းရှိသည်။
S.E.A. Power Gent Co., Ltd
S.E.A. Power Gent Co., Ltd သည် စွမ်းအင်လုပ်ငန်းကုမ်ပဏီတခုဖြစ်ကာ အရှေ့တောင်အာရှ စီးပွားရေးတိုးတက်ရေး အတွက် ASEAN Economic Community (AEC)တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာလုပ်ဆောင်ကာ ထောက်ပံ့မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းကြီး တခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းအင် အရင်းမြစ်လုပ်ငန်းများတွင် အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။ Cummins, Perkins, Volvo တို့၏ကိုယ်စားလှယ်လဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နေစွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်၊ ဘိုင်အိုမက်စ်(biomass)၊ ကိုဂျင်စွမ်းအင်စနစ်(Co-Gen power systems) စသည့်လုပ်ငန်းများတွင်ပါ ချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
S.E.A Power Gent Co., Ltd. သည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ပေးရာတွင် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်။ASEAN Economic Community (AEC) နှင့် ပူပေါင်းကာ အခွင့်လမ်းသစ်များနှင့် ဈေးကွက်သစ်များ ဖော်ဆောင်ပေးရန်။
Volvo PENTA TAD733GE 220/200 kVA (176/160kW) မီးနိူးစက် ကုနျပို့လှာရယူရနျ